Gudbiyaha FM Awood Sare, Gudbiyaha FM la qaadi karo
Waa maxay Iibka - Qalabka idaacadaha FMUSER ee ay door bidaan hawl-wadeennada idaacadaha iyo isku-dhafka ayaa hadda si weyn loogu isticmaalaa cabbirro kala duwan oo baahinta raadiyaha ah, tusaale ahaan, baahinta masraxa-wadista, baahinta kaniisadda, baahinta imtixaannada, baahinta jaamacadda, baahinta bulshada, baahinta macdanta. , iyo meelaha dalxiiska ee baahinta, iwm. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale bixinaa qalabka idaacada TV-ga
Goobta Iibka ugu Fiican - Dhammaan gudbiyaasha FM-yada waxay leeyihiin tayo maqal oo heer sare ah iyo gudbinta signal maqal deggan. Guddiga xakamaynta wuxuu ka kooban yahay xoojinta awoodda marxaladda si loo hubiyo saameynta wax soo saarka tayada codka stereo; Naqshad qaabaysan oo is haysta oo leh 0 soo noqnoqda. Qalabka aluminiumka ah ee tayada sare leh oo leh marawaxad qaboojin oo ku dhex jira, kaas oo hubinaya xasilloonida hawlgalka joogtada ah ee qalabka; Guddi LCD dareen leh oo soo noqnoqonaya oo muujinaya hagaajinta aqoonsiga hardware habboon.
Maxaad u dooratay FMUSER - Bixiye khabiir ah iyo soo saaraha sahayda qalabka baahinta raadiyaha, waxaan sidoo kale ku siinnaa xalal loo habeeyay baahi kasta oo baahineed gaar ah miisaaniyada ugu fiican, oo ay ku jiraan baakadaha qalabka oo dhameystiran oo leh xulashooyin wanaagsan iyo taageero farsamo oo waqtiga-dhabta ah laga bilaabo rakibaadda ilaa adeegga iibka kadib.